Genesis 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde ahyɛde maa nnipa nyinaa (1-7)
Mmara a ɛfa mogya ho (4-6)
Nyankontɔn apam (8-17)
Nkɔmhyɛ a ɛfa Noa asefo ho (18-29)
9 Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mma na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monwo na monnɔɔso na monhyɛ asaase so ma.+ 2 Mo ho hu nkɔ so nka asaase so mmoa nyinaa, wim ntuboa nyinaa, mmoa a wɔwea fam nyinaa, ne ɛpo mu mpataa nyinaa, na wonsuro mo. Seesei mede wɔn ahyɛ mo nsa.*+ 3 Mmoa a wɔte ase nyinaa, mede ama mo sɛ munni.+ Mede ne nyinaa ama mo sɛnea mede nhaban momono maa mo no.+ 4 Ɛnam a mogya,+ kyerɛ sɛ, ne nkwa* wom no, ɛno na ɛnsɛ sɛ mudi.+ 5 Afei nso, abɔde a ɔte ase biara a ɔbɛka mo mogya a ɛyɛ mo nkwa* agu no, mɛma wabu ho akontaa. Sɛ onipa ka ne yɔnko mogya gu a, mɛma wabu ho akontaa, efisɛ ɔyɛ ne nua.+ 6 Obiara a ɔbɛka onipa mogya agu no, wɔnam onipa so na ɛbɛka ne mogya agu,+ efisɛ Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so.+ 7 Mo de, monwo na monnɔɔso, na mo ase ntrɛw nyɛ bebree wɔ asaase so.”+ 8 Ɛnna Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mma a wɔka ne ho no sɛ: 9 “Afei me ne mo reyɛ apam,+ mo ne mo asefo a wobedi mo akyi aba, 10 ne abɔde* biara a ɛte ase a ɔka mo ho; nnomaa, wuram mmoa, ne asaase so mmoa nyinaa, wɔn a wofi adaka no mu nyinaa; asaase so abɔde a ɛte ase nyinaa.+ 11 Yiw, me ne mo reyɛ apam yi: Meremma nsu nyiri mfa ɔhonam* nyinaa bio, na meremma nsu nyiri nsɛe asaase bio.”+ 12 Onyankopɔn toaa so sɛ: “Apam a me ne mo ne abɔde* a ɛte ase biara a ɛka mo ho reyɛ no, eyi na ɛbɛyɛ ho sɛnkyerɛnne akosi awo ntoatoaso nyinaa so. 13 Mede me nyankontɔn ato omununkum mu na ayɛ apam a me ne asaase reyɛ no ho sɛnkyerɛnne. 14 Bere biara a mede omununkum bɛba asaase so no, nyankontɔn bepue wɔ omununkum no mu. 15 Na mɛkae m’apam a ɛda me ne mo ne abɔde biara a ɛte ase* ntam no, na nsu renyiri nsɛe ɔhonam nyinaa bio.+ 16 Nyankontɔn no bɛba omununkum mu, na mɛhwɛ akae daa apam a ɛda Onyankopɔn ne abɔde biara a ɛte ase* wɔ asaase so ntam no.” 17 Onyankopɔn tii mu kyerɛɛ Noa sɛ: “Eyi na ɛbɛyɛ apam a me ne ɔhonam a ɛwɔ asaase so nyinaa ayɛ no ho sɛnkyerɛnne.”+ 18 Noa mma a wofi adaka no mu puei ne Sem, Ham, ne Yafet.+ Akyiri yi, Ham woo Kaanan.+ 19 Eyinom ne Noa mma baasa no, na wɔn mu na asaase so nnipa nyinaa fi hwetee.+ 20 Afei Noa fii ase yɛɛ kua, na ɔyɛɛ bobefuw.* 21 Ɔnom bobesa no bi, na ɔbowee, enti bere a ɔda ne ntamadan mu no, na ne ho apa. 22 Kaanan papa Ham hui sɛ ne papa ho gu hɔ,* na ofii adi kɔbɔɔ ne nuanom baanu no amanneɛ. 23 Ɛnna Sem ne Yafet faa ntama de guu wɔn kɔn ho de wɔn akyi kɔɔ ntamadan no mu. Na woyii wɔn ani too nkyɛn kɔkataa wɔn papa ho, enti wɔanhu ne ho. 24 Bere a Noa nyanee a nsã* no atetew n’ani so no, ɔtee nea ne ba kumaa no ayɛ, 25 na ɔkae sɛ: “Nnome nka Kaanan.+ Ma ɔnyɛ nkoa mu akoa mma ne nuanom.”+ 26 Ɔsan kae sɛ: “Ayeyi nka Yehowa, Sem Nyankopɔn,Na Kaanan nyɛ n’akoa.*+ 27 Onyankopɔn mma Yafet nnya tenabea a ɛtrɛw,Na ɔntena Sem ntamadan mu. Ma Kaanan nyɛ akoa mma ɔno nso.” 28 Nsuyiri no akyi no, Noa dii mfe 350 kaa ho.+ 29 Enti mfe a Noa dii nyinaa yɛ 950, na owui.
^ Anaa “munni wɔn so.”
^ Anaa “mo kra mogya.”
^ Anaa “abɔde a ɛte ase.”
^ Anaa “ɔhonam a ɛte ase nyinaa kra.”
^ Anaa “da adagyaw.”
^ Ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ Sem akoa.